Koofiyado leh qalab iyo daabacado ayaa xiran | Ragga Stylish
Michael Serrano | | Dhameystirka, fashion
Waxaa jira sababo badan oo loo haysto arsenal koofiyad wanaagsan iyo koofiyado, gaar ahaan xilliga xagaaga, marka lagu daro "maalmaha timaha xun" ee caadiga ah waxaa jira sababo caafimaad (waxaa lagugula talinayaa inaad maqaarka qorraxda ka ilaaliso saacadaha dhexe ee maalinta).
Xilli ciyaareedkan, koofiyadaha leh daabacadaha iyo appliqués waa isbeddel. Kuwa soo socdaa waa shan moodal oo leh labadaba ujeedooyin yaryar iyo kuwo yaryar:
Dabool faneed ah oo laga sameeyay denim buluug khafiif ah iyo a nibir nibiriga. Mawduucdeeda badmaaxiinta iyo qaab dabacsan ayaa ka dhigaysa mid ku habboon qalab lagu wareejiyo muuqaalka xeebta.
Loogu jeestay mid ka mid ah astaamaha Alessandro Michele's Gucci, shabeelka ayaa ah jilaaha ugu weyn ee sidoo kale ku jira koofiyaddan. Laba madax oo shabeel ah ayaa u muuqda kuwo ka guuxaya saldhig leh astaanta saxiixa.
Vans x Lawska
Vans ayaa hada bilaabay soo aruurinta kaabsal loogu tala galay 'lawska'. Mid ka mid ah qaybaha ayaa ah koofiyaddan ay Woodstock iyo Snoopy ay ku biirayaan astaanta astaanta dharka waddooyinka Mareykanka, taasoo keentay daabacaadda hawada nostalgic. Madadaalo laakiin leh shaqsiyad weyn.
Shaatiyada maahan dharka kaliya ee qaata astaamaha bariga. Qalabka sida koofiyadaha sidoo kale waxaa lagu sasabaa qaababkooda iyo midabbada soo jiidashada leh. Xaaladdan oo kale waa a Naqshad Japanese ah oo masduulaagii lagu daray.
Haddii aad doorbideyso minimalism, tixgeli koofiyadaha caadiga ah ama ujeedooyinka hoos loo dhigay. Shirkadda Cove waxay soo jeedinaysaa a koofiyad huruud leh oo leh daabac buur leh midab buluug ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Koofiyado leh motif ama sabab loo xirto koofiyado
Ciidaha mideeya ama kala taga lamaanaha?